'सीमा नाघेर वामदेव कमरेडबारे टिप्पणी गरेको देख्दा चित्त दुख्छ' [अन्तर्वार्ता]- कुराकानी - कान्तिपुर समाचार
चुनाव प्राविधिक कुरा हो । ४० हजार मतका बाबजुद हार्नु भनेको केही न केही हाम्रो गडबडी भयो । नेताले पनि यसमा सोच्नुपर्दछ । केही कमजोरी भयो कि ? कहिलेकाहीं पैसाको छेलोखेलोले काम गर्छ ।
काठमाडौँ — विधि–पद्धतिमा पार्टी चलाउनुपर्ने, एक व्यक्ति एक जिम्मेवारी लागू हुनुपर्ने र सरकारलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्नेलगायतका मुद्दा लगातार उठाउँदै आएका नेकपा वरिष्ठ नेता एवं पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको ‘सम्पूर्ण’ चासो ७९ दिन चलेर सकिएको स्थायी कमिटी बैठकले समेत सम्बोधन गर्न सकेन ।
त्यसैले दुई अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालले तयार पारेको १५ बुँदे प्रस्तावमा बैठक सकिने दिन शुक्रबार नेता नेपालले १७ बुँदे ‘सुझाव’ राखे । यद्यपि त्यो उनको असन्तुष्टिका रुपमा आएको थियो । यसै सन्दर्भमा नेपालसँग कान्तिपुरकी बबिता शर्माले गरेको कुराकानीको मुख्य सम्पादित अंशः
७९ दिनमा स्थायी कमिटी बैठक सक्नुभयो । बैठकको मुख्य उपलब्धि के भयो ?
पार्टी संकटमा थियो । नेतृत्वबीचमा एक किसिमको अविश्वास र असमझदारी सिर्जना भयो । अन्तर्विरोधहरु थिए । यी समस्या हल गर्न उपायहरुको खोजी भयो । त्यो खोजीको सिलसिलामा हामी एउटा सहमतिको विन्दुमा पुगेका छौं । सहमतिको विन्दुमा पुग्दा मूल चिज पार्टीलाई विधिमा चलाउने भन्नेबाट सुरु भएको हो । ठूला कमिटी हुँदा समयको सीमा हुन्छ । त्यसो हुनाले ठूला कमिटी बनाउन हुँदैन । त्यसको कारण पर्याप्त छलफल गर्न सकिँदैन । अहिले बाध्यताले गर्दा केन्द्रीय र स्थायी कमिटी ठूलो हुन पुगेको छ । स्थायी कमिटी बैठक बस्न पनि कठिन थियो । यो सबै स्थितिले गर्दा लामो समय लिएर धेरै छलफल गरेर जान सक्ने अवस्था रहेन ।
तर पनि कार्यदल बनाईयो । कार्यदलको तर्फबाट प्रतिवेदन आयो । प्रतिवेदन सचिवालयमा छलफल भयो । त्यसलाई समेत ध्यानमा राखेर दुई अध्यक्षको तर्फबाट विशेष प्रस्ताव प्रस्तुत गरियो । त्यसमा हाम्रा टिप्पणी छँदै थिए । फेरि सचिवालयमा छलफल नभएको हुँदा हाम्रा सुझाव पनि समेटिएका होलान् भन्ने अनुमानको कुरा भयो । कतिपय कुरा समेटिएका पनि छन् । कतिपय कुरा अझै मिलाउनुपर्ने छ । कतिपय कार्यान्वय गर्दा ध्यान दिनुपर्ने छ । तर, जे भए पनि एकचरण हामीबीच रहेको असमझदारी, अन्तर्विरोधलाई समाधान गर्ने दिशामा कदम चालेका छौं ।
अघिल्लो बर्ष मंसिरकै सहमतिमा फर्किनु थियो त यो महामारीका बेला यत्रो जगहसाँइ किन गर्नु भयो भन्ने प्रश्न छ नि ?
समस्या दुई अध्यक्षको मात्रै होइन । एक व्यक्ति एक मुख्य जिम्मेवारीको कुरा हो । यसको सुरुवात माथिबाटै भयो । पहिला केही सहमति पक्कै गरेका थियौं, त्यसको पालना भएन । पालना नभएर नै समस्या पैदा भयो । अन्य ठाउँहरुमा पनि पालना हुन सकेन । अब पालना हुने क्रम सुरु भएको छ । कार्यकर्ताको मूल्याङ्कन, कार्यकर्तालाई आबद्ध गर्ने, एकीकरणको काम अगाडि बढाउने सन्दर्भमा मापदण्डको पालना नहुँदा पनि उत्पन्न भएको समस्या हो । त्यसमा जोड दिइयो । सिंगो कमिटीको ध्यान गम्भीरताका साथ आकर्षित भयो । मापदण्ड लागू गर्ने ठाउँबाट गयो । अरु सबै कुरा कामको आधारमा व्यक्तिको मूल्याङ्कन हुनेछ । अब व्यक्तिको परीक्षा सुरु हुनेछ, हामी कति पार्टी, कमिटीप्रति वफादर छौं, प्रतिबद्ध छौं । त्यसको पालना गर्न हामी कति तत्पर छौं भन्ने कुरा हाम्रा काम, व्यवहार र गतिविधिबाट देखिनेछन् ।
तस्बिरहरू : कञ्चन अधिकारी/कान्तिपुर
यसको मतलब निर्णय कार्यान्वयमा आशंका कायमै छन् ? तपाईले शुक्रबारको बैठकमा राख्नुभएका लिखित मतमा पनि त्यो कुरा झल्किन्छ ।
आशंका गर्न त हुँदैन । मैले सुझावहरु राखेको हुँ । यी कुराहरु सुधार गर्नुपर्छ भन्ने कुरा राख्नै पर्‍यो । किनकी आफ्ना सुझाव ठाउँमा र समयैमा राखिएन भने किन ध्यानाअकर्षण गरेनौं भन्ने प्रश्न उठ्यो भने जवाफ के दिने त ? होईन म तमासा हेर्न बसेको थिएँ भन्न त भएन । तपाईहरुले बिगार्नु भयो भने म कुरा उठाउँला भनेर चुप लागेर बसेको थिएँ भन्न भएन । सकारात्मक रुपले कुनै पनि समस्याको समाधान होस् भनेर मैले कुरा राख्छु । सकभर गल्ती हुँदै नहोस्, समस्या सिर्जना हुँदै नहोस् भन्ने पक्षको मान्छे हुँ ।
त्यसो भए ती मतहरु असन्तुष्टि हुन् कि सुझाव ?
अहिले त सुझाव नै हुन् । पालना भएन भने असन्तुष्टि सिर्जना हुन्छ ।
कार्यान्वयन भएन भने त्यसपछिको रणनीति के हुन्छ ?
त्यसपछि के गर्ने भनेर अहिले नै भन्दै हिँड्ने ? घोषणा गर्दै हिँड्ने ? हिजोका निर्णयबारे आज नै मेरो मुखबाट अविश्वासको शब्द निस्कियो भने राम्रो हुँदैन ।
यसअघि पनि तपाईले फरक मत राख्नुभयो । तर सम्बोधन भएनन् त ?
अहिले विषयले ठाउँ पाएको छ । सचिवालयले गर्ने, स्थायी कमिटीले गर्ने, विभागहरु लगायतले गर्ने भनेको छ । केही छलफलको क्रममै छन् । केही विषयहरु पेन्डिङ्मा छन्, ती सबैलाई टुंगो लगाउनु पर्‍यो । अहिले हामी सरकारमा छौं । सरकारमा हुने पार्टी र पार्टीको नेतृत्व ज्यादा जिम्मेवार हुनुपर्छ । यसलाई हल गर्न लचिलो भएर प्रस्तुत हुनुपर्छ । हामीकहाँ लचकताको अभाव देखियो । त्यो लचकताको अभाव र चाम्रोपनाले पनि समस्या खडा गर्‍यो ।
व्यक्ति नै सबैथोक हो भन्नेमा पुग्यो । व्यक्ति सबैथोक हैन । ऊ पनि कसैको मातहतमा छ । मातहतमा छु भन्ने ठान्यो भने सीमामा बस्छ । मातहमा छैन भन्यो भने अनियन्त्रित हुन पुग्छ । हामी सबै सीमामा छौं । नियमबाट चल्नुपर्ने अवस्थामा छौं । यो बुझ्नु पर्छ । नियम र विधिभन्दा माथि कोही हुन सक्दैन । कम्युनिष्ट पार्टी त झन् तानाशाही हुनै सक्दैन । यहाँ भ्रम के छ भने कम्युनिष्ट पार्टी तानाशाही हो । कम्युनिष्ट पार्टी तानाशाही हुनै सक्दैन ।
बैठक सकिँदा केही नेताहरुले मूलतः अहिले दुई धारको व्यवस्थापन भएको टिपप्णी गरे । के नेकपामा अब दुई धार मात्र हो ?नेकपामा एउटै धार छ । नेकपाको धार आन्दोलनको धार हो । यो धार विभाजित भयो भने निकै ठूलो नकारात्मक परिणाम पैदा हुन्छ । त्यसकारण कोही यहाँ व्यक्तिको पुच्छर भएर जन्मेको पनि छैन, मर्दा पनि मर्दैन । व्यक्ति हामीले देखेका छौं । व्यक्ति आन्दोलन छाडेर भाग्न सक्दछ, पार्टी छोड्न सक्छ । पार्टी, आन्दोलन त्यागेर जानेको पछि कोही लाग्छन् ? लाग्दैनन् । यही आन्दोलन, पार्टीको निम्ति जसले जीवन समर्पित गरेको छ, उसले अन्यत्र कहीँ पनि भविष्य देख्नैन । त्यसकारण अरुको धार खोजेर व्याख्या गरेर जाने होइन । पार्टीभित्र अनेक प्रकारका विचार, प्रवृत्ति हुन सक्लान् । यसलाई ध्यानमा राखेर कित्ताकाट गर्न हुँदैन ।
राजा महाराजाका दिन पनि गए । हामी नयाँ राजा महाराजाका रुपमा उदय हुन पनि चाहदैनौं । उदय हुनु पनि हुँदैन । हामी आफूलाई सुप्रिम पनि ठान्दैनौं । ठान्नु पनि हुँदैन । अहिले पार्टीमा सुप्रिम ठान्ने स्थिति पनि छैन । अहिले हामी सबै खुबी भएका मान्छेहरु छौं । आफ्नो आफ्नो इतिहास बोकेका छौं । सबैका आफ्ना आफ्ना क्षमता छन् । यी सबै खुबीको साझा फुलवारी बन्न पुगेको छ नेकपा । यसलाई राम्ररी व्यवस्थापन गर्ने कुशलता, नेतृत्व गर्ने जिम्मेवारीमा पुर्‍याएको छ ।
अध्यादेश प्रकरणयता तपाईं दाहालसँग मिल्नु भयो । तर, अहिले दाहालले ओलीसँग मिलेर तपाईलाई धोका दिनु भएको हो ?
यो तपाईहरुको ‘पर्सेप्सन’ होला । धोका दिनुभयो कि, केही परिस्थिति थियो कि, केही बाध्यता थियो कि, केही सम्भावना उहाँले देख्नु भयो कि ! त्यो उहाँको कुरा उहाँलाई नै सोध्नुस् । मैले उहाँले भनेको र सुनेको कुरालाई भन्नु सकुलाँ । यति भन्न सक्छु कि एउटा परिस्थिति र परिबन्धबाट घुम्दै फिर्दै यो विन्दुमा आइपुगेका छौं । अब हामी अगाडि बढ्छौ । सबैले केही शिक्षा पक्कै लिएको हुन्छ । त्यसकारण समस्या नबल्झिायोस् भन्ने कुरामा धेरै होस् पुर्‍याउनु पर्छ । यो घाउ निको हुने दिशामा जाँदा बल्झिने खतरा नबनिदियोस् भन्ने कुरामा समयमै बुद्धि पुर्‍याउनु पर्छ ।
अप्ठेरोमा पर्दा दाहालले तपाईंहरुसँग सहकार्य गर्नुहुन्छ तर तपाईंहरुसँग सल्लाह नगरी ओलीसँग मिल्ने गरेको देखिन्छ । अहिले पनि त्यही देखियो । दाहालेले सँधै उपयोग गर्नुभयो भन्ने लाग्दैन ?
प्रचण्ड कमरेडले मसँग सल्लाह नगरेको होइन । धेरैजसो सल्लाह गर्नु भएको छ । सबै सल्लाह भएको पनि हुन सक्छ । या मेरो मनमा केही सल्लाह भएकै छैन भन्ने परेको पनि हुन सक्छ । मनका सबै कुरा भन्दै हिँड्न भएन, मैले । कार्यदल बनाउँदा पनि हाम्रो सहमति नै हो । समाधानको दिशातिर जानुपर्छ भन्ने कुरामा पनि सहमति भएकै हो । अहिले परिस्थिति, परिबन्द र पार्टीभित्रको समस्या समाधान हुने सम्भावनालाई ध्यानमा राखिकन जानुपर्छ भन्ने लागेको हो ।
तपाई र दाहालबीचको समीकरण निरन्तर रहन्छ ?
मेरो सबै नेतासँगको सम्बन्ध राम्रो रहन्छ । मेरो बानी के छ भने मलाई वास्ता गर्‍यो भने म पनि वास्ता गर्छु । वेवास्ता गर्‍यो भने ज्यूज्यू गर्दै हिँड्दिन । म स्वाभिमानीखालको मान्छे हो । यो स्वाभिमान मूलुकमा मात्रै होइन अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा पनि छ । म कसैलाई पनि मालिक ठान्दिनँ । कर्मचारी भएर काम गर्दा हाकिम ठानियो होला । त्यहिबेला म खरदार हुँदा पनि हाकिमले राम्रो मान्नुहुन्थ्यो । हामीसँगै चेस खेल्थ्यौं । पछि पार्टी र आन्दोलनको आवश्यकताले गर्दा नोकरी छोडें । मेरा जीवनका धेरै उतारचढावहरु छन् । ती उतारचढावबाट गुज्रेर यहाँसम्म आएको छु । यत्तिकै ६५ बर्ष नाघेको हैन ।
ओली र दाहालले पार्टी विभाजनको सम्भावना टर्‍यो भन्नुभयो । विभाजन गर्न खोजेको तपाईंले हो कि अरुले ?
विभाजन गर्न कसले खोजेको थियो भन्नेबारे त अध्ययन गर्नुस् न । विभाजन गर्दाखेरि के–के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्नेकुरा अध्ययन आएपछि म पनि भनौंला । तर, अध्यादेश आउन थालिसकेपछि त्यसले चिन्ता खडा गरेको थियो । किन अध्यादेश आयो होला ? किन नेकपा एमाले नामको पार्टी दर्ता भयो होला ? ती मान्छेहरू को हुन्, कसले लगाएको हो ? भन्ने यी सबै कुराले शंका उपशंका र प्रश्न खडा गरेको थियो । आपसी अविश्वास बढेपछि मानिसहरू छोरमा पुग्न सक्दछन् । यसकारणले यस्ता कुरालाई ‘ग्रे’ एरियामा राखिदिनुपर्छ । यो भनिहाल्ने ‘नेचर’ पनि छैन ।
प्रधानमन्त्रीले विदेशी र प्रतिक्रियावादी शक्तिले पार्टी विभाजन गर्न खोजेको तर यो बैठकमार्फत् उनीहरुलाई सटिक जवाफ दियौं भन्नु भयो । विदेशी शक्तिहरुको प्रभाव नेकपामा छ ?
नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टी र समाजवाद देख्न नचाहने शक्ति छन् । लुकेको छिपेको छैन । कम्युनिस्ट पार्टी हुर्केको देख्न चाहने छैनन् । लेख र टिप्पणी पढ्नुस् त ! यी कम्युनिस्ट पार्टीहरू थुक्क भनेनन् ? कम्युनिस्ट पार्टी नचाहने विचार प्रवृति त भयो । अब हामी बुझेर जिम्मेवार भएर चल्नुपर्छ । सबैभन्दा पहिले जिम्मेवार मान्छेले चल्नुपर्छ । मूल नेताले पहिला सोच्नुपर्छ । कहिलेकाँही नेता बिग्रिँदा कार्यकर्ताले आन्दोलन जोगाएका छन् । एकीकृत कम्युनिस्ट पार्टीको नेता विभाजित भएपछि नयाँ कार्यकर्ताको पंक्ति तयार भयो । हामीले नै लगाइदियौं । २०२८ को झापा आन्दोलन र २०३२ सालको आन्दोलनले पुराना नेतालाई अस्वीकार गरेर हिँडेको हो नि । नयाँ अभियान संगठन सुरु गरेको हो । त्यो हामीले सुरु गरेको हो । नेता हुँदाखेरि धेरै दुःख उठाउनु पर्दैन ।
भएका नेताले नै जिम्मेवारी पूरा गरिसकेपछि नयाँ नेताको हातमा सहजै रूपमा हस्तानरण होस् भन्ने चाहना हुन्छ । नेतृत्वमा बस्ने मानिसले आफ्नो समयमा राम्रो भूमिका खेलिदिउन् पार्टीलाई राम्रो ढंगले अरुको हातमा हस्तान्तरण गरिदिउन्, बिग्रेको पार्टी होइन भत्केको पार्टी होइन, भत्केको छिन्नभिन्न निराश भएको पार्टी होइन एकताबद्ध भएको पार्टी हस्तान्तरण गर्नुपर्छ ।
चुनाव हारेका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभामा मनोनित गर्ने निर्णयको सर्वत्र विरोध भएको छ नि ?
चुनावमा त जीतहार भइरहन्छ । नहारेको नेताको नाम बताउनुस् त ? अहिले अर्को बहस चलिरहेको छ हार्ने बित्तिकै पाइँदैन भन्ने । त्यो गलत हो ।
यो चुनावमा कोही प्राविधिक कारणले हार्ने बित्तिकै अस्वीकृत ठान्न हुँदैन । उसको आवश्यकता राष्ट्रले के खोजेको छ ? तपाईंलाई खोज्न त जाँदैनन् नि । तपाई बनिदिनुपर्‍यो भनेर जतिसुकै रोए र टाउको फोडे पनि दिँदैनन् । किन खास खास नेतालाई दिन्छन् त ? भारतमा हेर्नुस् त चुनावमा हारे पनि तिनै व्यक्तिहरूलाई त्यहाँको राज्यसभामा लिएको छैन ? अहिले वामदेव कामरेडको बारेमा जथाभावी टिप्पणी भएको छ त्यो गलत हो । वामदेव गौतम के जनतामा रिजेक्टेड मान्छे हो ?
चुनाव प्राविधिक कुरा हो । ४० हजार मतका बाबजुद हार्नु भनेको केही न केही हाम्रो गडबडी भयो । नेताले पनि यसमा सोच्नुपर्दछ । केही कमजोरी भयो कि ? कहिलेकाहीं पैसाको छेलोखेलोले काम गर्छ । कहिलेकाँही बुथ कब्जाले, कहिले अन्तरघातले काम गरेको हुन्छ । कहिले आफ्नो ढंग नपुग्दा, जनताको अपेक्षा पूरा नगर्दा जनता रिसाइहालेको छ, भड्किहालेको छ भने भोट अन्तै हाल्छ । पछि मैले त गल्ती गरेँ भनेर जनताले नै स्वीकार गर्छ ।
उहाँलाई लग्नै पर्ने आवश्कता के छ ?
पार्टीमा वामदेवको आवश्यकता छैन ? उहाँको भूमिकाको इतिहासमा योगदान छैन ? यसरी मान्छेले सीमा नाघेर भन्न हुँदैन । अहिले संविधानमा भएको कुराबारे भइरहेको ब्याख्या गलत हो । संविधानसभाका बेला जोसुकै व्यक्तिलाई पनि मन्त्री बनाउने चलन बसालेका थियौं । चुनावमा हार्न पाएको छैन भोलिपल्टै मन्त्री बनाउने ६ महिनाका लागि भए पनि । त्यो ठीक होइन भनेर बनाएको हो ।
मानौं आजको चुनाव हार्‍यो । ६ महिनापछि उपनिर्वाचनमा ठाउँ खाली छ भने उसले पाउँछ कि पाउँदैन ? त्यहाँ उसले ‘टेस्टेड’ हुन, जितेर आउन पाउँछ कि पाउँदैन ? कि पाँच वर्षको लागि चुप लागेर बस्नुपर्छ ? सिद्धान्त के हो ? उसले ६ महिनापछि खाली ठाउँमा उपनिर्वाचनबाट सानदार भोटले जितेर आयो भने उसलाई के भन्ने ? त्यसैले मान्छेले सीमा नाघेर वामदेव कमरेडको बारेमा टिप्पणी गरेको देख्दा मलाई पनि चित्त दुख्छ । बहुत गलत हो । मान्छेको मानमर्दन गर्नु भएन । राष्ट्रिय सभामा चुनिएरै नारायणकाजी श्रेष्ठ आउनुभयो । श्रेष्ठले गोरखामा चुनाव जित्न सक्ने अवस्था हुन्थ्यो त ? त्यहाँ कहीं न कहीं त्रुटी भयो । यहाँ कम्युनिस्ट पार्टीको प्रभाव र व्यक्तिको प्रभावको कुरा हुन्छ । यी दुई कुरा बुझ्न सक्नुभएन भने चुनाव बुझ्नै सक्नुहुन्न ।
वामदेवको विषयमा नेकपाकै नेता कार्यकर्ताबाट विरोधका स्वर पनि आएका छन् नि ?
मान्छे अरु कुराबाट प्रभावित हुन्छन् । त्यसरी बोल्नु हुँदैन । नेताको मानमर्दन गर्नु हुँदैन ।
त्यो अभ्यास त तपाईंबाटै सुरु भयो भनेर टिकाटिप्पणी पनि भएका छन् नि ?
मलाई पनि बेलाबखतमा घोचपेच गर्छन् । ममात्रै होइन अरु ठुल्ठूला नेता पनि भएका थिए । तर, माधव नेपाल तारो किन भयो भन्दा माधव नेपाल कसैको निम्ती घाँडो भयो होला । यो संसार बुझिसाध्य छैन । म जति पढ्छु, महाभारतको फिल्म हेर्छु, किताब पढ्छु त्यहाँ कृष्णका उपदेश छन् । चाणक्यका विश्लेषण सुन्छु । लाग्दछ अहो यो मान्छेको जात कस्तो छ ! जति गरेपनि पार नलाग्ने मान्छे । राम्रा पनि छन,् नराम्रा पनि छन् ।
कसले के भन्यो भन्नेको पछि नलाग्नुस् तर जायज कुरा छ भने स्वीकार गर्नुस् । अनुचित काम तपाईंबाट भएको छ भने स्वीकार गर्नुस् । अनुचित काम गर्दैन नगर्नुस् । गरेको छैन भने कसैलाई नटेर्नुस् । कसैको मैले खाएको छ ? कसैलाई ठग्या छ ? दुःख दिएको छ ? सताएको छ ? बरु कतिको हित, कल्याण गरेको छ । सैकडौं मान्छे छन् निजी तवरमा पनि । त्यसैले मान्छेको मान मर्दन नगरौं ।
अटलबिहारी बाजपेयी हारेका होइनन् ? इन्डियामा उठ्छ त्यो कुरा ? लामो अभ्यास गरेर आएकामा त्यस्तो संस्कार छ भने यो नेपाली संस्कार धिक्कार छ । त्यत्रो ठाउँमा कतिचोटी हारेका होइनन् अब्राहम लिंकन ? अब्राहम लिंकनले सधैंभरी म चुनाव हारेँ भनेर टाउकोमा हात राखेर बसिरहनुपर्ने ? हार्न सक्छन् कुन ठूलो कुरो भयो ? यस्ता मान्छेले त कोही जाँचमा फेल भयो भने परिवारका मान्छे आत्महत्या गरेर मर्छन् । प्रोत्साहन पो दिनुपर्छ कि केही छैन, मिहिनेत गर बाबु भनेर ।
जनताबाट पराजित भइसकेपछि केही वर्ष पर्खिने धैर्य त हुनुपर्छ होला नि नेतामा ? जबर्जस्ती आउनैपर्छ भन्ने पनि होइन होला ?
व्यक्तिको कुरा होइन । पार्टीलाई आवश्यकता भयो भने हुन्छ । हारेका सबैलाई ल्याउँदैनन् नि त । अरुलाई वास्ता नगर्ने खासलाई वास्ता गर्नुको पछाडि उसमा भएको खुबी, क्षमता होला नि । अनि त्यो सकारात्मक पक्ष नहेर्ने ? त्यसमा दुःख व्यक्त नगर्ने ?
२०६४ सालको चुनावमा म पार्टीको महासचिव भएका बेला अरु पार्टीका नेताहरुका बारेमा यिनीहरूलाई हराउनका लागि म जान्नँ भनेर नामै तय गरेको थिएँ । किनभने बल्लबल्ल संविधानसभामा हामी जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधि खोजिरहेका छौं । ती पार्टीका प्रमुख नेता भएनन् भने कस्तो संविधान बन्ला ? कस्तो सभा होला ? त्यो भएको हुनाले नेताहरूको विरुद्धमा चुनावी सभामा जान मानिनँ । कीर्तिपुरमा प्रचण्डको विरुद्धको आमसभामा जान्न भनेर पठाइदिएको थिएँ । महसुस त हुँदोरहेछ नि । गिरिजाबाबु, प्रचण्डले महसुस गर्नुभएको होला । त्यही महसुस भएको हुनाले आवश्यकता र उपादेयता गर्नुभएको होला । त्यै आवश्यकता र उपादेयता अहिले अरु नेताको पार्टीलाई भइरहेको छ ।
तर, यस्तै–यस्तै कारणले राजनीतिप्रति युवाहरूमा वितृष्णा फैलिइरहेको होइन र ?
समाजमा भएका विकृति, बिसंगतिका, भ्रष्टाचार, अनियमितताका विरुद्धमा, आफूकेन्द्रित प्रवृतिका विरुद्धमा जसरी लाग्नुपर्ने हो त्यसरी लागिरहेका छैनौं । र, हामी पनि चुर्लुम्म डुबिरहेका छौं । हामीले जनताको र अरुको हित होइन आफ्नो हित केन्द्रबिन्दुमा राख्ने गरेका छौं । त्यसो हुनाले नेताहरू र राजनीतिप्रति वितृष्णा बढेको छ । त्यसलाई हटाउने र विश्वास जगाउने चुनौती हाम्रासामू छन् ।
भदौ १८ को सचिवालय बैठकमा प्रधानमन्त्रीले वामदेव गौतमलाई मनोनितका लागि सिफारिस गर्ने सहमति जनाउनुभएको थियो । तर, अहिलसम्म भएन किन ?
त्यो ढिला भयो । मलाई थाहा छैन के कारणले हो । त्यही बेलामा पनि मैले उठाएको थिएँ कि कहिले क्याबिनेट बस्छ भनेर ? आज बस्दैन भनेपछि भोलि त बस्छ होला, भोलिको क्याबिनेटले गर्छ होला भनेको थिए । किन गरेन भन्ने जानकारी मलाई छैन । मैले वामदेवलाई पनि सोध्न पाएको छैन । उहाँलाई ल्याउने निर्णय भइसकेको हो । पहिले पार्टीले निर्णय गरिसकेको हो । ल्याउनु पर्छ ।
सरकारको काममा पार्टीको भूमिका बढाउने भनिएको छ, अब सरकारको काम प्रभावकारी हुने विश्वास छ तपाईलाई ?
अवश्य पनि । अपेक्षा त्यही हो ।
केन्द्र र प्रदेश सरकार पुर्नगठनको निर्णय भएको छ । कसरी हुन्छ ?
हामीले भर्खर तय गरेका छौै । अव बसेर छलफल गर्छौं । छलफलपछि कसरी लागू गर्ने भन्ने काम गरौंला ।
महाधिवेशन चैतमा नै सम्भव छ त ?
हुन्छ, किन हुँदैन ? सातौं महाधिवेशन २०५९ सालमा गरिएको थियो । त्यो महाधिवेशन तीन महिनाको तयारीमा भएको थियो । अहिले कोभिड–१९ को समस्या छ । असोज महिनापछि अलि घट्छ कि भन्ने पनि छ । कसै कसैले मंसिरसम्मको कुरा पनि गरिरहेका छन् । चुनौती भए पनि कति समय लाग्ला र !
एकता महाधिवेशन सहमतिमा गर्ने भनिएको छ । तपाई अध्यक्षको दावेदार हो की हैन ?
असहमतिमा गर्ने भन्ने कहीं लेखिदैन । सकेसम्म सहमतिमै गर्ने भन्ने हुन्छ । सहमतिको अधिकतम् कोसिस हुन्छ । जहाँसम्म दावेदारीको कुरा छ, अहिले घोषणा गर्दै, गीत गाँउदै हिँड्ने कुरा हैन । म त्यस्तो गर्दिनँ । केन्द्रीय कमिटीको बैठकपछि बल्ल महाधिवेशनको ‘च्याप्टर’ खुल्ला हुन्छ ।
प्रकाशित : भाद्र २८, २०७७ ११:३०
हिउँ चितुवाको पर्यावरणीय अवस्थाबारे सचेतना जगाउन नेपालसहित १२ वटै देशमा एकै दिन दौड आयोजना
भाद्र २८, २०७७ अब्दुल्लाह मियाँ
काठमाडौँ — सुन्दा अनौठो लागे पनि शनिबार र आइतबार सुन्दर यो जीवको बचाउ, संरक्षण र बासस्थलको पर्यावरणीय स्वास्थ्यबारे सचेतना जगाउन हिउँ चितुवा पाइने १२ वटै देशमा दौड आयोजना भएको छ ।
पोखराको अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एक्याप) मा कार्यरत कर्मचारीहरुले पनि हिउँ चितुवाको बचाउको सन्देश दिन शनिबार दौड पूरा गरेका छन् ।
ती सबैजसो देशमा हिउँ चितुवा संरक्षण र अनुसन्धानमा काम गर्नेहरुले शनिबार हिउँ चितुवाको संरक्षणका लागि दौड पूरा गरेका थिए । हिउँ चितुवा पाइने विभिन्न देशका अनुसन्धानकर्ता, सेलिब्रेटी र यसको बचाउका लागि परेका हजाराैं व्यक्तिहरु यो अभियानमा सहभागी भएका थिए ।
हिउँ चितुवा पाइने देशमा २३ बासस्थल (भू–दृश्य) पहिचान गरिएको छ । तीमध्ये नेपालमा तीन वटा पर्छन् । पूर्वमा कञ्चनजंघादेखि लामटाङ, मध्येमा मनास्लुदेखि अन्नपूर्ण र पश्चिममा धौलागिरीदेखि अपिनाम्पासम्म पर्छन् ।
प्रकाशित : भाद्र २८, २०७७ ११:२८